Dowladda Soomaaliya oo si dabacsan ula hadashay Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo si dabacsan ula hadashay Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa si dabacsan ula hadashay dowladda Kenya oo xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada waddan uu madmadow soo kala dhex galay muddooyinkan dambe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka wasaaradda Arrimaha dibadda ee DF Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dalalka deriska la ah Soomaaliya ay ugu muhiisantahay dowladda Kenya, hadalkaas oo uu ka muqqdo dabac, kaddib muddo khilaafka diplumaasiyadeed oo soo jiitamayay labadii sano ee u dambeysay uu u dhaxeeyay labada dowladood.
“Mar walba Soomaaliya waxaa ay qaadataa go’aamo isku soo dhawyen ah oo muhiim u ah dalalka Geeska Afrika si loo fududeeyo isku socodka ganacsiga iyo is dhexgalka bulshooyinka ayuu yiri” Wasiir Cawad. Wasiirka ayaa adalkan ka sheegay furitaankii safaaradda Soomaaliya ee Nairobi, waxaa uuna kusoo beegmayaa xilli weli uu jiro khilaafka diblumaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dowladood.
Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa soo gaaray Muqdisho toddobaad ka hor, waxa uuna dowladda Soomaalliya kala hadlay hagaajinta xiriirka labada dowladood, hadalkan dabacsan ayaa u muuqda mid madaxda dowladda Soomaaliya lagaga awood roonaanayo waxyaabihii marka hore muranka dhaliyay oo ay qeyb ka tahay dacwadda badda ee Soomaaliya oo hakad gashay tan iyo wixii ka dambeeyay goortii uu hoggaanka la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ganacsigii dowladda Kenya ay keeni jirtay Soomaaliya ayaa hakad ku yimid, kaddib markii la joojiyay Qaad-kii ay usoo dhoofin jireen waddanka Soomaaliya.